Dowlada Dalka Urdun oo sare u qaaday qiimaha korontada Dalkeeda – SBC
Dowlada Dalka Urdun oo sare u qaaday qiimaha korontada Dalkeeda
Cumaan:-Wasiirka tamarta iyo kheyraatka macdanta Urdun ninka lagu magacaabo Khaalid Duuqaan ayaa sheegay in qiimaha korontada la kordhiyey 16% taasna ay hergeli doonto horaanta bisha July ee soo socoto.
Wasiirka ayaa cadeeyey in koroka qiimaha uu ku koobnaan doono oo keliya kuwa isticmaala wax kabadan 750 Kilowatt.
Wasiirka ayaa ku micneeyey qaraarka qiime kororka korontada ay ka dhalatay kadib go’itaankii sahayda gaaska dabiiciga Masar dhowr toddobaad kadib labadii qarax lala beegsaday dhuumaha gaaska ka soo qaada jasiiradda Saynaa .
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in urdun ay hadda ka hesho 20% qoondadii gaaska ay masar ku heshiiyeen taasna ay hoos u dhigtay shidaalkii matoorada dabka dhaliya ee gaaska ku shaqeeya.
Si looga gudbo shidaal yarida labo markab oo sida nafto iyo gaas dabiici ah ayaa gaaray dalka Urdun kuwaasi oo ay soo dirtay shirkadda Aramko ee sucuudiga , iyadoo sidoo kalana la sugayo markab saddexaad oo isla shirkadda leedahay oo soo gaari doono urdun bartamaha bisha soo socoto.
Dowladda Urdun ayaa u dirtay Qaahira wafdi farsamo oo diyaariya wadahadalo ay yeelan doonaan wasiirada dalalka Masar iyo Urdun dabayaaqada toddobaadka si heshiis looga gaaro arrinta dhoofinta gaaska Masar dalka Udun.
Bishii April ee la soo dhaafay xukuumadda Urdun ayaa ansixsay qaadista talaabooyin dhowr si loo yareeyo isticmaalka dalka tamarta kadib markii uu la waayey gaaskii urdun ay ka heli jirtay Masar.
Xukuumadda ayaa ku dhaqaaqday in ay kor u qaado qiimaha korontada magaalooyinka si loo kabo khasaaraha balaaran ee la soo gudboonaday shirkadda korontada bilihii la soo dhaafay.